चिनियाँ भाषामा शुभ प्रभात – Vocre
चिनियाँ भाषामा शुभ प्रभात
चिनियाँ भाषामा शुभ प्रभात भन्ने वाक्यांशलाई अन्य भाषामा भन्न जत्तिकै सजिलो छ!
जबकि मन्डारिन र क्यान्टोनिजले अंग्रेजी भन्दा फरक वर्णमाला प्रयोग गर्दछ, Pinyin मा शब्दहरू सुनाउन अझै पनि अपेक्षाकृत सजिलो छ (चिनियाँ भाषाको रोमान्टिक हिज्जे) and learn each character separately.
कसरी चिनियाँ मा शुभ प्रभात भन्न
भन्न चाहनुहुन्छ भने चिनियाँमा शुभ बिहानी, तपाईंले पहिले कुन भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ जान्न आवश्यक छ!
जब हामी भन्छौं कि हामी चिनियाँ बोल्छौं, हामी वास्तवमा धेरै फरक बोलीहरू मध्ये एक बोल्न सक्छौं.
को चीनमा सबैभन्दा सामान्य बोली मन्डारिन हो (जसलाई Putonghua पनि भनिन्छ). चीनको अधिकांश जनसंख्याले यो बोली बोल्छन्. तर तपाईं पनि क्यान्टोनिज सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जियाङ, न्यूनतम, वू, वा अन्य बोलीहरू, पनि.
चीनमा कसैले कुन बोली बोल्छ भन्ने कुरा मुख्यतः वक्ता कहाँको हो भन्ने कुरामा भर पर्छ. सियान उत्तरमा बोलिन्छ, र क्यान्टोनिज हङकङमा बोलिन्छ, क्यान्टोन, and Macau.
मन्डारिनमा शुभ प्रभात
को शाब्दिक अनुवाद मन्डारिनमा शुभ बिहानी zǎoshang hǎo हो. तपाईं zǎo ān पनि भन्न सक्नुहुन्छ. वा, यदि तपाईं राम्रोसँग चिन्ने कसैलाई शुभ प्रभात भन्न चाहनुहुन्छ भने (अनौपचारिक शुभ प्रभात यदि तपाइँ आफ्नो पार्टनर वा रूममेटलाई अभिवादन गर्दै हुनुहुन्छ भने) केवल zǎo भन्नु हुनेछ.
चिनियाँ भाषामा Zǎo को अर्थ बिहान र बिहान हुन्छ. किनकी चिनियाँले पनि लिखित शब्दमा अक्षरहरू प्रयोग गर्छ, zǎo को लागि क्यारेक्टर, जुन यो जस्तो देखिन्छ 早, means first sun.
दोस्रो पात्र, जसको अर्थ शुभ प्रभातको अर्थ शान्ति हो. त्यसो भए, जब तपाईं कसैलाई चिनियाँ भाषामा शुभ बिहानीको कामना गर्नुहुन्छ, you’re actually wishing themapeaceful morning or first sun.
क्यान्टोनिजमा शुभ प्रभात
क्यान्टोनिज मा, the written symbols for the phrase good morning are similar to the ones in Mandarin.
यदि तपाईं क्यान्टोनिजमा शुभ प्रभात वाक्यांश लेख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले निम्न वर्णहरू स्केच गरेर त्यसो गर्नुहुनेछ: बिहान. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो प्रतीक समान छ, तर दोस्रो प्रतीक यसको मन्डारिन समकक्ष भन्दा फरक छ (यद्यपि त्यहाँ प्रतीकहरू बीच केही समानताहरू छन्).
यो वाक्यांश मन्डारिनमा भन्दा क्यान्टोनिजमा फरक उच्चारण गरिन्छ, पनि. यदि तपाईं शुभ प्रभात भन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले भन्नु हुन्छ, “Jou san.” Not totally different from Mandarin but also not the same either.
अन्य भाषाहरूमा शुभ प्रभात
वाक्यांश सिक्न चाहनुहुन्छ विभिन्न भाषाहरूमा शुभ प्रभात? तिमी एक्लो छैनौ!
शुभ प्रभात अन्य भाषाहरूमा सबैभन्दा सामान्य अभिवादन मध्ये एक हो, त्यसैले यो वाक्यांश पहिले सिक्नु कुनै पनि भाषाको लागि उत्कृष्ट परिचय हो. जब हामी अंग्रेजीमा शुभ प्रभात भन्छौं, अन्य भाषाका वक्ताहरूले शुभ दिन भन्न सक्छन्, नमस्कार, or good afternoon more commonly.
सुसमाचार यो हो कि हामीसँग अन्य भाषाहरूमा कसरी सुभ प्रभात भन्न सकिन्छ भन्ने मार्गनिर्देशन छ — यस वाक्यांशलाई केही सामान्य भाषाहरूमा कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझावहरू सहित। (र कम से कम सामान्यतया बोलिने) संसारमा भाषाहरू!
सामान्य चिनियाँ वाक्यांश र शब्दहरू
अब तपाईलाई थाहा छ कि कसरी चिनियाँमा शुभ प्रभात भन्न सकिन्छ, तपाईं केहि अन्य सिक्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ साझा चिनियाँ वाक्यांश, पनि.
एकपटक तपाइँसँग तपाइँको बेल्ट मुनि केहि वाक्यांशहरू छन्, you can start practicing withalanguage partner or try out your new favorite phrases inacommunity that speaks Mandarin.
साझा चिनियाँ अभिवादन
सम्भवतः कुनै पनि भाषामा सबैभन्दा सामान्य अभिवादन नमस्कार हो (दोस्रो मात्र अलविदा!). मन्डारिनमा नमस्ते भन्न, तपाईले मात्र भन्न आवश्यक छ, "Nǐhǎo,” which is pronounced nee-how.
चीनमा, शिष्टता धेरै महत्त्वपूर्ण छ! यसैले धन्यवाद र तपाईलाई स्वागत छ जस्ता वाक्यांशहरू सिक्न-गर्न-का लागि वाक्यांशहरूको सूचीको शीर्षमा हुनुपर्छ।. अन्य मन्डारिनमा सामान्य वाक्यांशहरू समावेश:
तपाईलाई स्वागत छ: Bù kèqì/ तपाईलाई स्वागत छ
शुभ - प्रभात: Zǎo/बिहान
शुभ रात्री: Wǎn’ān/晚安
मेरो नाम: Wǒ jiào/我叫
तपाईको पहिलो भाषामा सबैभन्दा सामान्य अभिवादन के हो? के तिनीहरू अंग्रेजीमा सामान्य अभिवादनहरू जस्तै छन्?
सबैभन्दा सामान्य चिनियाँ शब्दहरू
कुनै पनि भाषामा शुभ प्रभात भन्नु भन्दा धेरै धेरै छ, नमस्कार, वा अन्य साझा अभिवादन, तपाइँ केहि अन्य शब्द र वाक्यांशहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ.
यदि तपाईं मात्र हुनुहुन्छ चिनियाँ सिक्न थाले, तपाइँ पहिले सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरू सिक्न चाहनुहुन्छ. Doing this helps you create the building blocks for speaking full sentences and saying phrases.
चिनियाँ भाषामा प्रयोग हुने केही शब्दहरू मात्र समावेश छन्:
तपाईं (बहुवचन): nǐmen/you
Tamen तिनीहरू वा तिनीहरूलाई 他们
अङ्ग्रेजीबाट चिनियाँ अनुवाद गर्न सुझावहरू
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै सधैं सजिलो हुँदैन. त्यसैले हामीले अङ्ग्रेजीलाई चिनियाँमा अनुवाद गर्न सुझावहरूको यो सूची कम्पाइल गरेका छौं (र यसको विपरित!).
भाषा अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
Google अनुवाद र अन्य नि:शुल्क अनलाइन भाषा अनुवाद एपहरू सधैं सही हुँदैनन्, र तपाईं भौतिक शब्दकोश वा पुस्तकबाट उच्चारण सिक्न सक्नुहुन्न!
भाषा अनुवाद एप डाउनलोड गर्नाले तपाईंलाई अन्य भाषाहरूमा शब्दहरू कसरी लेख्ने र उच्चारण गर्ने भनेर सिक्न मद्दत गर्न सक्छ. तिमी सक्छौ भने, भ्वाइस-टु-टेक्स्ट र अडियो आउटपुट प्रदान गर्ने अनुवाद एप रोज्नुहोस्, जस्तै Vocre.
यी सुविधाहरूले उच्चारणबाट अनुमान लगाउने कार्य हटाउँछ. Vorcre ले तपाईंलाई एकैचोटि सम्पूर्ण शब्दकोश डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, which you can use to translate words and phrases offline.
मध्ये एक उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू, Vocre मा उपलब्ध छ iOS को लागि एप्पल स्टोर र एन्ड्रोइडका लागि गुगल प्ले स्टोर. यो पनि एक महान छ तपाईंलाई नयाँ भाषा सिक्न मद्दत गर्ने स्रोत.
भाषा साझेदार खोज्नुहोस्
तपाईंले किताबहरू पढेर वा इन्टरनेटमा सर्फिङ उच्चारण गरेर नयाँ भाषा सिक्नुहुन्न! मन्डारिन बोल्ने अभ्यास गर्न भाषा साझेदार खोज्नुहोस्. तपाईले धेरै धेरै परिवर्तन सिक्नुहुनेछ, टोन, र तपाईले एक्लै भाषा सिकेर गर्नुहुने भन्दा nuance.
आफूलाई संस्कृतिमा डुबाउनुहोस्
एकचोटि तपाईंले केही शब्द र वाक्यांशहरू सिक्नुभयो, try out your new language skills in the real world.
चिनियाँ भाषाका चलचित्र वा टिभी कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस् (उपशीर्षक बिना!), or try readinganewspaper in Mandarin or Cantonese to learn new words and symbols.